Apple ghọrọ ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na 2015 | Esi m mac
Apple na-ebili dị ka ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na 2015 ma ọ dị afọ iri na esepu aka
O yiri ka ọ dịghị onye nwere ike dethrone Apple n'elu ndepụta ahụ mgbe ọ bịara n'ihe ọhụụ na ọ bụ Companieslọ ọrụ ndị United States ha bụ ndị na-anọkarị n'ọtụtụ ọnọdụ nke ndị otu a họọrọ.
Dabere na ọkwa Boston kacha ọhụrụ, Apple bụ ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ maka afọ nke iri na-esote, Google na-esote ya. N'aka nke ọzọ, isii n'ime ụlọ ọrụ iri kacha elu na ogo a nke ụlọ ọrụ 50 kachasị ọhụrụ na ụwa, dị na United States, ịbụ ngụkọta nke 29 n'ime ndepụta a. ndepụta zuru ezu. Tesla na Microsoft bịara na nke atọ na nke anọ, ebe ndị ọkà mmụta ọgwụ na Gilead na-abịa na asatọ na Amazon debere nke itoolu.
N'azụ Google ka Tesla Motors na Microsoft Corp. n'otu n'otu. Nke a nhazi ọkwa a na-eme na akụkụ na ndabere nke echiche nke ndị isi ụlọ ọrụ 1.500 gburugburu ụwa, ebe a na-ajụ ha ụlọ ọrụ ndị ha na-ewere dị ka ndị kachasị ọhụrụ, ebe ọ bụ na ụdị nhazi a dị oke mkpa ma bụrụkwa echiche nke onwe ha karịa eziokwu na ebumnuche ebumnuche.
Ọ ga-kwuru na kwuru uloru enweghị ike ịhọpụta ụlọ ọrụ haN'aka nke ọzọ, ihe fọdụrụ na 40% nke usoro ahụ dabere na ego enyerela ndị na-ekenye ya oge karịa afọ ise. Ọ dị mkpa igosipụta n'etiti ụlọ ọrụ niile, Tencent China na kemgbe afọ gara aga arịgoro 35 oche ruo mgbe etinye ya na ebe iri na abụọ.
Na mkpokọta, a na-ekekọrịta ndepụta ahụ n'etiti ụlọ ọrụ nwere oke ọrụ ha n'ime ụwa nke teknụzụ na ụlọ ọrụ ndị raara onwe ha nye na akpaaka, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike ịhụ ụdị dịka Walt Disney, 3M ma ọ bụ Nike.
Nnyocha ahụ mekwara ka o doo anya na ihe ọhụrụ dị ugbu a dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ. Pasent 79 nke ndị isi ụlọ ọrụ zara na ọ dị n'ime ihe atọ kacha mkpa pasent ụlọ ọrụ gị kachasị elu ebe nyocha ahụ malitere na 2005.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple na-ebili dị ka ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na 2015 ma ọ dị afọ iri na esepu aka
MacBooks na-anọgide na-eduga na ntụkwasị obi na afọ ojuju onye ọrụ dịka Nkwupụta Ndị Ahịa